Madaxa IAEA ayaa sheegay 'xidhiidh la'aan yaab leh' oo ka timid dowladda Iran. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Madaxa IAEA ayaa sheegay ‘xidhiidh la’aan yaab leh’ oo ka timid dowladda...
Madaxa IAEA ayaa sheegay ‘xidhiidh la’aan yaab leh’ oo ka timid dowladda Iran.
Madaxa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan ilaalinta Nukliyeerka ayaa Jimcihii sheegay inay tahay “wax lala yaabo” in uusan wax xidhiidh ah la yeelan dowladda cusub ee Iran dhowr arrimood oo muhiim ah tan iyo markii ay xilka la wareegtay.
Rafael Grossi, oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah (IAEA), ayaa rajaynayey inuu booqdo Iran ka hor inta uusan furmin shirka soo socda ee Golaha Sare ee IAEA 22-ka Nofembar, laakiin wuxuu cadeeyay Jimcihii inuu ka xumaaday inaan wali la helin casuumaad.
Hadaladii u dambeeyay ee Grossi ayaa imaanaya iyadoo diblumaasiyiintu ay isku diyaarinayaan wadahadalo caalami ah oo ka dhacaya Vienna si ay dib ugu bilaabaan dhamaadka bishaan dib u soo celinta heshiiskii Nukliyeerka ee Iran 2015.
Dadaalladaas oo barbar socda, IAEA waxa ay isku dayday in ay xaliso dhowr arrimood oo kale oo khuseeya Iran, oo ay ku jiraan xannibaado lagu soo rogay qaar ka mid ah hawlaheeda baadhitaan ee la soo rogay horaantii sanadkan.
Grossi waxa uu booqday Tehran bishii Sebtembar halkaas oo uu ku gaadhay heshiis ku saabsan helitaanka qalabka ilaalinta ee xarumaha Nukliyeerka Iran, laakiin waxa uu rajaynayay inuu soo laabto wax yar ka dib si uu wadahadalo dheeraad ah ula yeesho dawladda madaxweynahe Ebrahim Raisi, oo xafiiska la wareegay bishii Ogosto.
“Wax xidhiidh ah oo aan la sameeyay dowladdan…oo halkaas joogay in ka badan shan bilood,” ayuu Grossi u sheegay warfidiyeenka, isagoo intaas ku daray in waxa keliya ee ka reeban ay ahayd “wadahadallo farsamo” oo uu la yeeshay madaxa cusub ee tamarta Nukliyeerka Iran Mohamed Eslami.
“Tani waa wax lala yaabo, waxaana u sheegayaa si furan sababtoo ah iyaga ayaan u sheegayaa,” Grossi ayaa yidhi.”Waxaa jira liis dheer oo ah waxyaabo aan u baahanahay inaan ka wada hadalno,” ayuu yidhi.
Previous articleQadar ayaa danaha Mareykanka ee Afgaanistaan maarayn doonta sida uu yidhi Blinken.
Next articleNISA oo kaalinta ugu weyn laga siiyay ka bixitaanka Amisom ee Soomaaliya.